Posted on August 16, 2018 by Mawlamyine Daily
၁။ ဆရာ ကျွန်မက အသက် ၂၄ပါ ကိုယ်ဝန်က ၆ပတ်ကျော်ပါ ဆေးမှားသောက်မိလို့ပါ Diclofenac သောက်မိတာပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသလားရှင့် အရမ်းစိုးရိမ်လို့ပါ ဖြေပေးပါရှင့်
၂။ ကျွန်တော် ညဘက်ဆို အိပ်ပြီးနှစ်နာရီလောက်ကြာပြီဆို လက်ပြင်နှစ်ခုကြား ကျေားရိုးတည့်တည့်ကနေ မခံနိုင်လောက်အောင်ကိုနာတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆို လက်နှစ်ဖက်က လှုပ်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ နဲနဲလေး လှုပ်တာနဲ့ ကျောပြင်ကနာတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် မျက်ရည်တောင်ကျရတယ်။ တနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ရောဂါခံစားနေရပြီဆို ဆေးခန်းသွားဆေးထိုး ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးစားလိုက်ရင် သုံးလေးရက်လောက်တော့ သက်သာသွားပါတယ်။ ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့ လေးလလောက်နေပြီးတော့ ပြည်ပကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ထွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရောက်တော့ ဆေးခန်းမကြာခဏသွားပြဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဆရာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဟိုဆေးနဲ့ သက်သာနိုး ဒီဆေးနဲ့ သက်သာနိုးနဲ့ ပြောင်းသောက်လာတာ ဆေးတွေလဲ စုံသွားတာပါဘဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အခုပို့လိုက်တဲ့ ပုံထဲကဆေးနဲ့ တော်တော်ကို အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အလုပ်က ပြန်လာလို့ ကိုယ်လက်တွေက နာလာပြီဆိုရင် ပုံထဲကဆေးကို တလုံး သောက်လိုက်ရင် အဲ့ဒီညဆို ကောင်းကောင်းအိပ်ရပြီး မိုးလင်းတဲ့အထိ နာကျင်မှုဒဏ်ကို မခံစားရပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဆေးသောက်လာတာ အလုံးသုံးဆယ်ကျော်လောက် သောက်လာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ထက်ရောဂါတခုက ထက်တိုးလာပါတယ်။ အစာစားပြီးတိုင်း ပြန်ပြန်အန်တယ်။ ထူးခြားတာတခုက မနက်စောစောနဲ့ နေ့လည်စားတဲ့ထမင်းဆို ပြန်အန်တယ်။ ညဘက်စားတဲ့ထမင်းတော့ မအန်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ထမင်းစားပြီးရင် ပူနေတဲ့ရေကို သောက်ရင်လဲ ပြန်မအန်ပါဘူး။ ထမင်းစားပြီး ရေအေးကိုသောက်ရင်တော့ ချက်ချင်းကို ပြန်အန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာ၊ အန်တာကဆေးကြောင့်လားဆိုတာကိုလဲ ဖြေကြားပေးပါဆရာ။
1. Diclofenac ဒိုင်ကလိုဖဲနစ် အနာအကိုက်သက်သာဆေး (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/nsaids.html
2. Diclofenac ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် အနာသက်သာဆေး (၃) https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/diclofenac.html
Previous PostPrevious သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ မြန်မာကျပ်ငွေကြေးလဲလှယ် ဈေးနှုန်းများ
Next PostNext သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်